Isweydaarsiga Suuqgeynta Baadhka ah: Goobta, Raadinta, Fulinta | Martech Zone
Jimcaha, Agoosto 3, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
In kasta oo erayga suuq -geynta afka uu si weyn u koray ganacsigeenna, haddana waxaan si daacad ah nasiib u yeelannay inaan helno macaamiil aad u cajiib ah oo ka baxa jidkooda si ay ula wadaagaan guushayada. Intii aan jidka ku sii jirnay, in kastoo, waxaan ku dhibtoonay helidda ilo aan waqti ka waqti u adeegsan karno xeelado gaar ah. Way adag tahay in lala shuraakoobo shirkad kale oo kaliya si ay ugu halgamaan guuldarrada, oo naga tagta inaan u soo qaadno qaybaha macmiilkayaga.
Kooxda blur waxay abuurtay an isdhaafsiga suuq geynta internetka in la isku xiro kheyraadka iyo shirkadaha. Iyaga oo adeegsanaya is -dhexgalkooda, waxaad ku dhejin kartaa fursadaha haddii aad tahay shirkad…
Kani maahan tartan: waa hab cusub oo lagu wado ganacsigaaga cusub waxaanan u oggolaannaa oo keliya khubaro leh khibrad la xaqiijiyay inay ku soo biiraan, Ma jiro shaqo gaar ah: waxaad u dhigtaa si la mid ah sida aad u yeelan lahayd fursad kasta oo ganacsi oo cusub.
Waan jeclahay barnaamijyada sidan oo kale ah, Elance, 99 Naqshado iyo adeegyo kale oo fursad siiya shirkadaha xirfadda leh iyo kuwa madaxa bannaan. Shirkad kastaa ma laha miisaaniyad suuqgeyn ama ilaha si ay ereyga u hesho. Is -weydaarsiga onlaynka ah ee sidan oo kale ah ayaa laga yaabaa inuu yahay waxa aad u baahan tahay uun haddii aad tahay hibo noocaas ah.
Nidaamku wuxuu leeyahay in ka badan 20,000 xirfadlayaal ah oo adiga kaa sugaya qor qoraalkaaga kooban!
Tags: blursuuq geyntadad badanbanaanisweydaarsiga suuq geyntasuuq madax banaangaroonka suuqgeynta
Tijaabooyinka Google ee Google Analytics… Meh